Musharax Madaxweyne C/naasir Shirwac oo gaaray magaalada Jowhar
Musharax Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdinaasir Xaaji Shirwac Maxamed ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar waxana uu musharaxu durba bilaabay inuu lakulmo qeybaha kala duwan ee bulshada Hirshabelle.
Sagal Radio Services • News Report • September 8, 2017
Iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay mudada loo asteeyay in ay dhacdo doorashada Madaxweynaha Hirshabelle ayaa waxaa si xowli ah ugaga socda magaalada Jowhar ololaha doorashada Madaxweynaha, iyadoo musharaxiinta iyo wakiilo ka socda musharaxiinta ay shirar kala gaar gaar ah la yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Golaha Wasiirada Hirshabeelle oo shir deg deg ku leh Jowhar iyo wafuud ku wajahan
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle oo xilka ka qaaday Madaxweyne Cosoble
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in goor dhow ay cod u qaadeen xildhibaanada baarlamanka Hirshabeelle inay kalsoonidii kala laabteen Madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble.
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo si weyn loogu soo dhoweeyay Jowhar (Sawiro)
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeele Cali Cabdulaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ee xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabeele.
DEG DEG: Doorasho farsameysan oo ku dhacday qaab boobsiis ah oo ku soo baxay Wasiir Nuux
Doorasho farsameysan oo ku dhacday qaab boobsiis ah ayaa goor dhow ka dhacday magaalada Jowhar, kaasoo lagu doortay labo kursi oo uu tartankooda ka taagnaa Muran iyo is qab qabsi.
Askar ka tirsan ciidammada dowladda oo lagu dilay qarax ka dhacay deegaan hoostaga degmada Jowhar
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in qarax miino oo lagu aasay deegaan lagu magacaabo Sabuun oo ka tirsan degmad Jowhar ku dhinteen saddex askari oo ka tirsan ciidammada dowladda.
Boqolaal ruux oo saaka isugu soo baxay Salaad Roobdoon ah magaalada Jowhar (Sawiro)
Guddiga doorashada oo maanta go’aan ka gaaraya shaqaaqadii xalay ka dhacday Jowhar
Guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa in go’aan ka soo saaraan buuqii iyo shaqaaqadii xalay ka dhalatay doorashadii Kursiga Aqalka Hoose ee Beesha Jidle ee Gugundhabe.
Qaban qaabada Xaflada caleema saarka Madaxda Hirshabeelle oo ka socota Jowhar
Sagal Radio Services • News Report • October 22, 2016
Qaban qaabada Xaflada caleema saarka Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle ayaa ka socota magaalada Jowhar, iyadoo ammaanka si weyn loo adkeeyay.
Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo maanta dhacaysa (Sawiro)
Waxaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta lagu doorto magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen uu yeesho maamulkaas.
Ciidamadii la wareegay xarunta shirka Jowhar oo isaga baxay
Sagal Radio Services • News Report • October 14, 2016
Ciidamo Milatari ah oo saacado la wareegay ammaanka xarunta uu ka socdo shirka maamulka Hirshabeelle ayaa ka baxay goobihii ay ku sugnaayeen iyagoo muddo saacado ah u diiday ergada ka qeybgalaysa shirka inay galaan gudaha xarunta.
Cismaan Barre Maxamed oo ku guuleystey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxaa ku guuleystey Xildhibaan Cismaan Barre Maxamed oo helay codad gaaraya 61 halka uu musharixii la tartamayay ee Abuukar Xasan Cali oo ka helay codad gaaraya 28cod .
Baarlamaanka Hirshabeele oo doortay guddoomiye kumeel gaar ah
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeele oo maanta yeeshay kulankoodii ugu horeyay ayaa u doortay guddoomiye ku meel gaar ah Maxamed Siyaad Barqadle oo ka mid ah xubnaha Baarlamaanka.
Xildhibaanada Maamulka HIRSHABEELLE oo lagu wado in maanta la dhaariyo
Waxaa ka soconaya magaalada Jowhar diyaargarowgii ugu dambeeyay ee xaflada dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka maamulka cusub ee HIRSHABEELLE.
Banaan bax saaka ka dhacay Jowhar iyo Maamulka degmada oo dadka ugu baaqay inay is dejiyaan
Sagal Radio Services • News Report • September 24, 2016
Banaan bax looga soo horjeedo shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada Jowhar ayaa saaka dhacay, iyadoo dadweyne careysan oo isugu soo baxay waddooyinka ay ka caroodeen falkii xalay ciidamo Boolis oo dhowaan laga keenay Muqdisho kula kaceen ciidamo deegaan ahaa.
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan nabadsugida ay shalay gelinkii dambe xabsiga u taxaabeen Wariye C/shakuur Shaa-shaa oo ahaa Agaasimaha Idaacad lagu magacaabo City FM iyo C/raxmaan Xuseen Cumar oo ahaa wakiil wareedka Telefishinka Kalsan.
Howlgallo lagu raadinayo ninkii ka dambeeyay dilkii Taliyihii Nabadsugida oo ka socda Jowhar
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya inuu halkaas ka socdo howl gal lagu baadigoobayo ninkii ka dambeeyay dil xalay loo geystay Taliyihii Nabadsugida Gobolka Sh/Dhexe, iyadoo howl galka ka socdo tuulooyinka ku dhow dhow Jowhar.
Beelaha gobolka Hiiraan oo mar kale qaadaceen shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe
Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Beledweyne odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda gobol Hiiraan ayaa si weyn uga soo horjeestay shirka maamulka loogu sameynaya gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ee ka socda Jowhar.
Mid kamid ah beelaha dega gobolka Sh/dhexe oo kulan ku yeeshay degmada Balcad
Kulan ay ka soo qeybgaleen duubabka dhaqanka,siyaasiyiin,qaar ka mid ah mas’uuliyiinta maamulka gobolka Sh/dhexe loogana hadlay aayaha beesha Wacbuudhan Abgaal ayaa lagu qabtay degmada Balcad.
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha oo goor dhow gaaray Jowhar (Sawirro)
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Maamulka Gobolka Sh/Dhexe oo beeniyay in la mamnuucay indha shareerka
Ku simaha Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Abuukar Cali Maqaney ayaa beeniyay warar sheegaya in Maamulka Gobolka uu mamnuucay qaadashada Indha shareerka, xilli maamulka uu isu diyaarinayo marti gelinta shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Bam lagu weeraray caawa Taliska Qeybta Booliska magaalada Jowhar
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in bam lagu weeraray Taliska Qeybta Booliska gobolka Sh/dhexe.
Haweeney si arxan darro ah ugu dishey magaalada Jowhar gabar 2 sano jir ah
Dhacdo naxdin leh oo aan hore u soo marin magaalada Jowhar ayaa haweeney ku dishay biyaha kanaalka Barwaaqo gabar yar oo 2 sano jir ah.
Dad loo qabqabtay banaanbax ka dhacay Jowhar oo ay ku jiraan 2 weriye oo la sii daayay
Sagal Radio Services • News Report • July 19, 2015
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in la sii daayay labo weriye iyo dhalinyaro aan tiradooda la shaacin oo loo qabqabtay maanta banaanbax ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
DEG DEG: Banaan bax ka socda Jowhar iyo qeybo ka mid ah Ganacsiga magaalada oo xiran
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in banaan bax uu ka socdo Xaafada Hantiwadaag, iyadoo dhaq dhaqaaqii ganacsiga ee xaafadaas uu yahay mid gebi ahaanba saaka xiran.
Bandow saaka la geliyay Jowhar, Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo howl gallo ka wada
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqii guud ee magaalada uu saakay ku jiro hakad, kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay si guud ugu faafeen xaafadaha, waxaana magaalada ay gashay bandow aroor hore ah.
Taliska Ciidamada xooga dalka oo ciidamo kala dhex dhigay deegaanadii lagu dagaalamay ee Bariga Jowhar
Taliska Ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa ciidamadii u horeeyay geeyay deegaano ku yaal duleedka bari magaalada Jowhar, halkaasoo ay ka dhaceen dagaal u dhaxeeyay labo beelood, kaasoo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac.
Qarax askari dilay oo Jowhar ka dhacay
Qarax waxyeello geystay ayaa shalay ka dhacay maanta agagaarka garoonka dayuuradaha ee magaalada Jowhar.
AMISOM iyo ciidamada dowladda oo 20 KM u jirsaday Jowhar
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya, ayaa la wareegay deegaanka Garsale, oo qiyaastii wax aan ka badneyn u jirta 20 KM magaalada Jowhar oo xarrun u ah gobolka Shabellaha Dhexe.
Jowhar oo xaaladdeedu ay kacsan tahay
Dhaq-dhaqaaq ciidan, ayaa ka jira qeybo ka mid ah gobolka Shabellaha Dhexe, halkaas oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya, ay doonayaan inay Shabaab kala wareegaan degmada Jowhar ee xarrunta gobolka Shabellaha Dhexe.